सिंहदरबारमा नेकपा सांसदहरुको भेला,कसले के भने ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsसिंहदरबारमा नेकपा सांसदहरुको भेला,कसले के भने ?
सिंहदरबारमा नेकपा सांसदहरुको भेला,कसले के भने ?
नेकपा सांसद जयपुरी घर्तीले भनिन्–‘अघि बिहान हामी केही सांसदहरु उपस्थित भएका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विगठनका लागि प्रस्ताव गरेको कुरा आयो । संविधान विपरित काम गरेको भनेर हामीले विरोध जनाएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विगठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव गरेपछि संसदीय समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ । खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न विषयबारे छलफलका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा अनर्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयपछि तरङ्गित भएका नेकपा सांसदहरु विभिन्न समूहमा छलफल गरिरहेका छन् ।
Previous articleचारवटै सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’मा, देशव्यापी रुपमा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
Next articleरियलले आज इबारको सामना गर्ने